Emva kokubeleka, ubuninzi bentsapho bentshintsho. Oku akusebenzi nje kuphela iingxaki zasekhaya kunye nobunzima obunxulumene nokunyamekela umntwana. Abafazi abaninzi, emva kokuvela kwilungu elitsha lentsapho, kunzima ukubuyela ebomini bobulili.
Iingxaki zesi sicwangciso zivame ukubangelwa zizizathu zendalo kunye neengqondo ngokupheleleyo. Bobabini abatshatileyo abakulungele ukulwa nobulili - iinkumbulo zentlungu efunyanwa ngumfazi intsha kwimemori kunye nokwesaba ngokucacileyo kwindoda yokuzisa intlungu yakhe kwintombi yakhe ethandekayo kwakhona. Kodwa zonke iingxaki kunye nokwesaba zincinci kalula.
Ababelethi be-Gynecologists bacebise ukuvalela emva kokubeleka kwiiveki ezingama-6. Eli xesha liyimfuneko ukuba umzimba womfazi abuyele. Oku akusebenzi kuphela kubafazi ababeletha ngendlela engokwemvelo, kodwa bazala ngoncedo lwecandelo laseKhesareya. Kakade ke, isibini ngasinye sizimela ngokuzikhethela ukuzimisela ukubuyisela ubudlelwane bomtshato, kodwa musa ukukhawuleza. Ngokuqhelekileyo izizathu zokukhathazeka zigqityiwe, kodwa kufuneka ziphawulwe. Ngoko, indlela yokuseka ubomi besondo emva kokuzalwa:
Umnqweno ongenakunyameko yimeko engokwemvelo yesithuba sokugqibela. Akukho sizathu soloyiko okanye ukutsalwa kwefellellation. Uthando nobudlelwane obuthembayo buya kunceda umfazi ukuba akwazi ukujamelana nokungaqiniseki ngokuhambisana nokunganeliseki ngokubonakala kwakhe. Ukongezelela, kufuneka kukhunjulwe ukuba umva osandul 'umva unomthwalo omkhulu kwiinyanga zokuqala, ukhathele kakhulu. Ukugxininiswa kumntwana akuchazwa kuphela ngumzulwana wesisu, kodwa nangomveliso we-hormone ekhethekileyo, i-prolactin. Emva kwexesha apho umzimba uhambelana neemeko ezintsha, yena ngokwakhe uya kusayina.
2. Ukuvalelwa kabuhlungu kunxulumene nokuveliswa okwaneleyo kokucoca ngamanzi.
Ukuveliswa kwe-lubrication yamanzini kuncitshiswe ngenxa yokuncipha kwinqanaba le-hormone yesergen. Kule meko, ingakumbi amantombazana achaphazelekayo, ukuya esikhathini emva kwesigama sonyaka emva kokubeletha. Kukuhlaziywa komjikelo owuphawu lokusebenza ngokuqhelekileyo kwinkqubo yokuzala.
3. Ukubonakala kwexesha lokugqibela.
Ngokuqhelekileyo, oomama badinga ixesha elaneleyo lokuba basebenzise ukubonakala kwabo okutsha, ukulungisa iimpazamo eziba ngandlela-thile baba ngabahlobo bababhinqa. Umoya uphuhliswa ngamanqaku atyunayo, awanzima ukuwuthwala, isisu esiqhekezayo kunye ne-flabby, ilahlekile yesikhumba. Kulo mzuzwana, into eyona nto ayikukusixinzelela uxinzelelo kwaye musa ukukhawuleza ukugijima ukuya kwiimpawu kunye nokuqina. Ngoku, kungakaze kwenzeke ngaphambili, umzimba womfazi udinga ukuba unesimo sengqondo esinyamekeleyo nokunyamekela. Kwizibhedlele zokubeletha baxela malunga nokuxilongwa kwemisebenzi eboniswa emva kokubeleka. Ukuphunyezwa kwabo kuya kunceda ukugcina nokuqinisa imizimba.
4. Ubudlelane bomtshato.
Ngamnye wabo kwixesha lokugqibela emva kokuphuma lilumkile. Oku kwendalo. Bobabini basebenzisa inxaxheba yabazali. Umlingane uzama ukuziphatha ngokungenakuqonda, engafuni ukuphazamisa umfazi okhulelwe kakade. Ungesabi ukubandakanya utata omncinci ekunakekeleni umntwana. Kuya kwenza lula ubomi kuwe kwaye ukhulule.
5. Uvakalelo olutsha.
Intshukumo yokuvakalelwa ekuthintekeni kwiindawo ezahlukileyo zomzimba kubafazi abathile baba mnandi, kwaye abanye babangela ukungakhululeki. Ukuthembela kuphela kunye nokunxibelelana kuya kunceda ukuphumla nokubuyela kwimpilo endala.
Abasetyhini abaninzi, balungiselela ukubeleka, banenkxalabo malunga nokubunjwa kwamabele abo. Enyanisweni, ukuma kwesifuba nokuzalwa komntwana kunye nokutya kwayo kuyahlukahluka kwaye kunokwenzeka ukuba uyilungise usebenzisa ukusebenzisa okukhethekileyo kungekudala emva kokubeleka, kodwa ngokukodwa ngexesha lokukhulelwa. Isimo sesisu, njengokubonakala kwamanqaku elula, kuxhomekeke ngqo kwi-elasticity and elasticity yolusu. Ukufuna ukubuyisela ubuhle besifuba sakhe, musa ukuyeka ukuncelisa! Apha kufuneka ufikelele kwingxaki ngendlela eyahlukileyo. Ngokuqhelekileyo ukubeka umntwana kwisifuba, qi niqiniseke ukuba ubonise ubisi olusele, olungenakusiza kuphela ukuma kwayo, kodwa kunye nokukhwabanisa okuphumelelayo. Musa ukuphelisa ukubeleka ngokukhawuleza, ungagqithisi isifuba. Oku kuya kuba nempembelelo embi kwimeko yakhe. Ukulahla ubudlelwane bezesondo kunokubangelwa kukuba i-state yolwando yolwandiso inokunyusa ukwanda kobisi, okubangele ukubunjwa kobisi ebhedini. Ungesabi okanye uhlazeke. Yonke inkohlakalo ye-oxytocin, engabangeli kuphela ukuzala, kodwa i-lactation nayo ngexesha le-orgasm.
Ukuba ulwalamano lwakho aluzange lubonwe ngumbonakalo womntwana, ngoko ukubuyiswa koqhagamshelwano ngesondo kuya kuba buhlungu, kungakhathaliseki ukuba kunzima kangakanani ukugqiba isigqibo kwaye awuyi kuqalisa ukucinga malunga nendlela yokuseka ubomi besondo emva kokubeleka. Ukuba uyaqonda ukuba ulungele ubomi bocansi:
1. Khangela indlela yokukhulelwa kwezinto ezithintekayo kokubili. Musa ukukhusela nangona uqhubeka uncelisayo kwaye awukabi kwakhona umjikelezo wokuya esikhathini. Kuboniswe ukuba ixesha le-amenctrhea ye-lactational ayikhuseli ikhulu leepesenti yokukhulelwa okuphindaphindiweyo. Kukho iindlela ezininzi zokukhulelwa kwezilwanyana: idivayisi ye-intrauterine, iipilisi zolawulo lokuzalwa, iikhondom kunye nendlela engasebenziyo - i-spermicides. Khetha uhlobo lokukhulelwa oluza kulandelelana nawe, umfazi wezinja uza kunceda. Khumbula ukuba iipilisi ezininzi azikwazi ukudibaniswa nokuncelisa. Kukulungele ukuqala ukusebenzisa iikhondom ngokubambisana ne-lubrication eyongeziweyo. Oku akuyi kunciphisa kuphela imbonakalo yentlungu, kodwa inokuthintela i-ingress yeebhaktheriya kwisiswini, okokuba, xa ukwanda, kungonakalisa izicubu ezingahlali.
2. Khetha umzuzu ofanelekileyo xa umntwana wakho elele okanye ephantsi kolawulo. Ngamanye amaxesha kubalulekile ukuphumla. Vula umculo ngokukhawuleza, ukhanyise ikhandlela. Khumbula indlela ovuyayo ngayo ngaphambili kwaye uyathemba iimvakalelo zakho. Musa ukufumana i-orgasm okokuqala, cinga nje ngovuyo oza kuzisa ngalo.
Ubunzima obuye buvela kwilamano lwakho bunokuwunqoba kalula, into eyona nto yindlela unesineke kunye nesineke ngayo!
Ukuxinezeleka kwePostpartum: unyango
Ukuzilungiselela ukulungiselela ukuzala
Ukuvalwa kwesisu emva kokubeleka
Xa kuphela indlela yokuphuma yecandelo lesondlo
Ngaba kunokwenzeka ukuba ubelethe emva kokuvala?
Indlela yokwandisa ubude bemilenze
Ukuphuhliswa kwentetho yomntwana oneminyaka elilodwa
Ingaphakathi: umphumo wombala kumntu
Yiyiphi indlela yokwandiswa kweenwele kulunge?
Indlela yokuchazela umntwana ukuba umama uya kuhlala nomnye umntu
Ukulala nokubaluleka kubomi babantu
Iimfihlelo eziphambili zesondlo socansi
U-Prokhor Chaliapin waqala ukuthetha ngeentlekele zeentsapho
Udokotela uJevgeny Morgunov
Ukwazi njani umntu onamaphupha akho
Galantine kwi inkukhu ebhaka
I-Chromotherapy - umphumo wonyango wombala emzimbeni
Ukunyameka okufanelekileyo kunye nempilo yakho
Yenza umfanekiso womfazikazikazikazi. Sakhetha iingubo, izesekeli, ukwakheka, iinwele